Waa kuma Ra'iisul Wasaaraha ay Soomaaliya xilligaan u baahantahay? | Keydmedia
Waa kuma Ra’iisul Wasaaraha ay Soomaaliya xilligaan u baahantahay?
Dadka siyaasadda odoroso ayaa sheegaya in Raiisul Wasaaraha hadda soo socdo laga doonayo isku keenidda dhinacyada kala irdhoobay, qancinta baarlamaanka dalka oo muddo kororsiga u hanqal taagyo, iyo maareynta mowjadaha siyaasadeed ee kaga furan dhinaca axsaabta Mucaaradka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Afartii sano ee la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dagaal joogta ah ku waday madaxda dowlad goboleedyada dalka, iyadoona xukuumaddii markaa jirtay ay arintaan garab ku siisay, islamarkaana ku fashilantay in ay mar uun isku keento.
Isfaham-waaga ka dhaxeeyo dowladda iyo qaar ka tirsan dowladaha xubnaha ka ah ayaa loo sababeynayaa in xilligaan dalku galo jahwareer siyaasadeed oo ku aadan dhinaca doorashada iyo kala irdhoobidda dhinacyada isku hayo siyaasadda dalka.
Muddo sodon cesho ah ayaa laga joogaa markii sifada sharci darrada aheyd lagu riday xukuumaddii Ra'iisul wasaare Kheyre oo la aaminsanyahay in ay ku guuleysatay kobaca dhaqaalaha, iyo kor u qaadista mushaaraadka ciidamada, islamarkaana taageero fiican ka heysatay wakiilada Beesha Caalamka.
Dadka siyaasadda odoroso ayaa sheegaya in Raiisul Wasaaraha hadda soo socdo laga doonayo isku keenidda dhinacyada kala irdhoobay, qancinta baarlamaanka dalka oo muddo kororsiga u hanqal taagayo, iyo maareynta mowjadaha siyaasadeed ee kaga furan dhinaca axsaabta Mucaaradka.
Raiisul Wasaaraha cusub ayaa laga doonayaa in uu noqdo mid dalka gaarsiin karo doorasho waqtigeeda ku dhacdo, muddo kororsina ka fogaado, ahaadana mid waaqica lagu jiro xeeladeeya, balse aanu aheyn dhawaan gal siyaasadda ku cusub sida ay qabaan soo jeediyaasha.
Inkastoo khaladaad siyaasadeed iska jiraan, haddana waxaa la qirsanyahay in tiirka ugu weyn ee dowladda Farmaajo iyo Wakiillada Beesha Caalamka isku hayay uu ahaa Xasan Cali Kheyre oo ceyrintiisa saaxiibada Caalamka ku tilmaameen mid u dib u dhaca u keeni karo hanaaka iyo geeddi socodka siyaasadda Soomaaliya.
Shaqsiga qaban doono xilka Ra'iisul Wasaaraha hambada ah ayaa laga doonayaa xalinta khaladaadkaas dhacay, iyo in uu la yimaado falsafad siyaasadeed uu ku maareyn karo howlaha qabyada ah ee fursadda yar u heysto.
Siyaasiyiin xilal hore soo qabtay, iyo kuwa hadda ku cusub saaxadda siyaasadda oo ay ku jirto Haweeney ayaa haatan la sheegayaa in ay saf ugu jiraan xilka Ra'iisul Wasaaraha muddada yar, balse wax qabadk badan looga baahanyahay.